Usoo guurista Helsinki - InfoFinland
Magaalooyin > Helsinki > Usoo guurista Helsinki
Khamiis ugu dambaysa bisha saacadda u dhexeysa 10–16.15
Faahfaahin dheeraad ah ka sii aqri: U soo guurista Finland.
Moving to HelsinkiIngiriis
Isu diiwaangelinta sidii deganne oo kale
Haddii aad si joogto ah ugu soo guurto Helsinki si aad u deganaato waa inaad degmada isaga diwaangelisaa sidii qof degane ah. Si aad degmada isaga diiwaangeliso waa in aad s shakhsi ah u tagto Goobta adeegga Helsinki ee Hay’adda dijitaalka iyo macluumaadka dadka:
Hay’adda dijitaalka iyo macluumaadka dadka, Helsinki
Tel. 0295 536 320 ama 0295 536 000
aqoonsiga qofeed (tusaale ahaan baasaboor)
ogolaanshaha joogista iyo kaarka joogitaanka (haddii aad u baahan ogolaanshaha joogitaanka Finland)
cadeynta diiwaangelinta xaq u lahaanshaha joogitaanka (oleskeluoikeuden rekisteröintitodistus) (haddii aad tahay muwaadin u dhashay Midowga Yurub)
Ogsoonoow, in warqadaha dibadda laga keenay ay ahaadaan kuwa loo turjumay af finnish, iswiidhish ama ingiriis islamarkaasna la sharciyeeyay. Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan sharciyeeynta dukumentiyada iyo diiwaangelinta ajaaniibta ka aqri bogga InfoFinland Isu diiwaangelin degane. Waxaa kale oo aad arrintan wax ka weydiisaa wakiilka dalkaada ee Helsinki jooga.
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan ka diiwaangelinta ajaaniibka nidaamka macluumaadka dadka iyo ku qorista degmada waxaad ka heleysaa bogga Hay’adda dijitaalka iyo macluumaadka dadka.
talabixinta ku saabsan su’aalaha la xiriira helitaana guriga iyo deegaanka
Markii ugu dambeysay ee waqtiga lala simay: 01.09.2021 Boggan war-celin ka soo dir